Sababnisaa osoo Mootummaan biyya kana geggeessaa jiru rakkoo diyaaspooraan kaasaa jiru kun eeyyee biyya kana keessa jira, fooyyeessuu dhaaf cimee hojjechaan jira jechaa jiruu, Mootummaan Amerikaas ta’e kan Itiyoophiyaa dhiyeenya kana dhimmi kana irratti mari’atanii bu’aan walii galtee isaan lamaanii hojiitti hiikamaa jiruu murtoo akkasii dabarsuun fedhii addaa dudduubaa waan qabu fakkaata.
San dura ilaalamuun kan irra ture, Mootummaan Itiyoophiyaa yeroo ammaa kan maal gochaa jira gaaffiin jedhamu ka’uutu irra ture.
Rakkoowwan akka biyyaalessaatti nu mudatan guutummaatti furuu dhaaf, Mootummaan yeroo itti hidhamtoota hiikaa jirutti, miidiyaa walabaa babal’isuuf yeroo itti ifaajaa jirutti, kanneen dhiibbaa mirga dhala namaa keessatti hirmaatan yeroo itti seeratti dhiyeessuuf waadaan galamaa jirutti murtoo akkasii dabarsuun tasumaayyuu rakkoon biyya kana keessa jiru daran babal’atee biyyi kun akka burjaajoftuuf haala mijeessuu wajjin wal-hin caalu.
Biyyi keenya yeroo ammaa Ministeera Muummee Dr.Abiy Ahmad n filachuun ishees madda rakkoo biyya keenya keessaa ni qoorsa waan jedhu irraa ka’uu ta’uunsaa beekamee osoo jiruu, osoo isaan muudamanii turban hin fixin dhiibbaa akkasii irraan ga’uun kun sababa quubsaa waan hin qabneef lammilee biyya kanaa fayyada jedhanii yaaduun nama rakkisa.
Murtoon H.RES.128 maqaa jedhuun birmadummaa biyya kanaa gaaffii jala galchuuf yeroo amma kanatti darbuun isaa walitti dhufeenya Amerikaa fi biyyya kanaa kan yeroo dheeraa laaffisuu irra darbeeyyuu haala gaanfa Afrikaa giddu galeessa kan hin godhanneef hojii maal na dhibdee dhaan hojjatamee dha.
An kan hunda keessaa na dhibe, inni hormaallee hormuma waa’een biyya keenyaa baaay’ee isaan hin dhibu-garuu lammileen Itiyoophiyaa biyya sana jiraatan akka waan –waan gaarii hojjetanii, akka waan seenaa hojjetaniitti yeroo murtoon kun murtaa’etti sirbuun isaanii ti. Kun baay’ee nama saalfachiisa, ofis nama taajjabsiisa. Akkamitti lammiin tokko biyya alaa taa’ee biyyi biraan birmadummaa biyya isaa akka sarbituuf karaa bana? Akkamitti biyya dhiigaa fi lafee lammilee isheen ijaaramte harka diinaatti dabarsee kenna?
Waan nama dhibu murtoon sun akka murtaa’een weebsaayitootaa fi Miidiyalee hawaasa gara garaa irratti maxxanfamanii turan. Akkuma beekamu murtoo sana irratti abbaan barbaade yaada isaa kennuu danda’a ture. Yaadawwan achirratti kennaman lammileen biyya kanaa biyya kana jaalatanis ta’e, lammileen biyya alaa yaadi isaan diyaaspoorota warra dhiibbaa geessisuun murtoon kun akka darnbu godhan irratti yaadi isaan kennan baay’ee na ajaa’ibsiise. Isaan keessa muraasa isaa gaditti dubbisaa
“Itiyoophiyaanonni kun tasuma waa hin baran,isaan diinuma hamaa mataa isaanii ti. Rakkoo keessoo ofii hiikkachuu dhaan nama alaa afeeruun gaarummaa tokkoyyuu hin qabu sirumaayyuu jeequmsa fida malee”
“Itiyoophiyaan biyya of-dandeessee jirtuu fi rakkoowwan keessoo ishee hiikkachuu osoo dandeessuu, qaamni biraan rakkoo kana naaf hiika jechuun birmadummaa biyya isaanii balaa irra buusuun booda sirbuun diyaasporota kanneenii nama qaanessa” kan jedhanii fi kkf hedduun achi jalatti tarreeffamanii jiru.
Mee dhugumayyuu, kun hammam of tuffachuu dha? Hammam seenaa wallaaluu dha.
Amerikaas ta’e biyyi biraan yoo faayidaa isaaniif ta’e malee Itiyoophiyaaf jedhanii waanti godhan tokko akka hin jiraanne beekuun barbaachisaa dha. Waa’ee mirga dhala namaa yoo ta’e ammoo kan akka Amerikaa mirga dhala nama dhiibu hin jiru. Fakkeenyaaf dhiibbaan Gurraachota Amerikaa irra ga’aa jiru hagam suukanneessaa akka ta’e argaa oolla, ajjeechaan fuulaa fi fuulaa biyya sana keessa jiru mirga dhala namaa giddu galeessa kan godhate akka hin taane osoo beeknuu, biyya Itiyoophiyaaf ammoo mirga fidu jennee yaaduun keenya waa’ee Amerikaa wallaaluu keenya nutti beeksisa.
Dhugaasaa walitti himuuf yoo ta’e Amerikaan mirga dhala namaaf falmuu irra beekamtii fi aangoo dhaan of-jajuu waan barbaadduuf humnaan socho’uu barbaaddi.
Sanas ta’e kanas, biyyi keenya Itiyoophiyaan yeroo amma hojii guddaa qabattee jirti. Innis rakkoo biyya keessatti nu mudatee karaa nagaa dhaan hiikuu dhaaf Muummee Ministeera keenya haaraa wajjin hojii keessa seennee jirra.
Jette jettee diyaaspooratiin mataa dhukkubbii keessa gallee ofumaa yeroo keenya waan gubnu natti hin fakkaatu. Kan nuti silaa barbaadnuwoo amma biyya keessatti nuuf argameerawoo, namni biraan biyya biraa dhaa dhufee rakkoo keenya akka nuuf hiiku nu hin barbaachisu. Sababnisaa bakka rakkoo keenyaas ta’e akka itti hiikkannu nutu beeka malee hormi nuuf hin beeku.
Kanaafuu ammas warri maqaa dhaaf biyyaaf yaadna jettanii yaaddan, yoo dhuguma waa’ee biyyaaf ta’e kottaa asumatti qabsaa’aa, yoo hin taane ta’emmoo uummata nagaa dhaan jiruusaa geggeeffataa jiru vaayirasii keessan itti hin facaasinaatii hanga sammuun keessan fayyutti achuma bakka jirtan taa’aan dhaamsa kooti.